Falanqaynta Farsamada Maalmeedka | FXCC
EUR / USD Iibiyey / USD USD / JPY
SHARCIYADA ISKU XIRIIRKA: Waxyaabaha ku jira mawduucan waa isgaarsiin suuq-geyn ah, mana aha cilmi-baaris maal-galin oo madaxbannaan Sidaa daraadeed, shuruudaha sharciga iyo shuruucda ee la xidhiidha cilmi baaris madaxbannaan ma khusayso qalabkani maaha mid mamnuucaya in wax laga qabto ka hor faafinta.
Qalabka waxaa loogu talagalay ujeedooyinka guud ee guud (ha ahaato ama ha sheegin fikradaha). Ma tixgelinayo duruufahaaga ama ujeedooyinkaaga gaarka ah. Wax kasta oo ku jira mawduucan waa (ama waa in loo tixgeliyaa) inay ahaato sharci, maaliyad, maalgelin ama talo kale oo ku xirnaan karta in la dhigo. Fikrad lagama helin wax waliba waxay soo jeedinaysaa talo soo jeedin FXCC ama qoraaga wixii khaas ah, amniga, macaamilka ganacsiga ama istiraatiijiga maalgashiga ku habboon qof kasta oo gaar ah.
Inkasta oo macluumaadka lagu soo bandhigay isgaadhsiinta suuq-geynta, laga helo ilaha la aamisan yahay in lagu kalsoonaan karo, FXCC wax dammaanad ah ma leh sida uu saxsan yahay ama dhammaystirnaanta. Dhammaan macluumaadka waa calaamad muujinaysa waana la bedeli karaa bilaa ogeysiis waxaana laga yaabaa inay noqoto mid ka baxsan taariikhda waqti kasta oo la bixiyay. Ma ahan FXCC, ama qoraaga buugani waa inuu mas'uul ka yahay wixii lumay oo aad si toos ah ama si dadban ah ugu gudbi karto, oo ka soo baxaysa maalgelin kasta oo ku salaysan macluumaad kasta oo halkan ku xusan.
Qalabkan waxaa ku jiri kara jaantusyo muujinaya qalab dhaqaale 'waxqabadkii hore iyo sidoo kale qiyaasaha iyo saadaasha. Macluumaad kasta oo la xidhiidha waxqabadkii hore ee maalgashiga looma xaqiijin karo waxqabadka mustaqbalka.
Haddii aan si kale loo sheegin, sicirka loo adeegsaday tusaalooyinka waa FXCC qiimaha gaarka ah, oo aan ahayn kuwa saddexaad.